Danjiraha Soomaaliya ee Kenya oo dhiig ugu deeqay shacabka Kenya | Somaliweyn	Home
Sunday, September 22nd, 2013 | Posted by admin Danjiraha Soomaaliya ee Kenya oo dhiig ugu deeqay shacabka Kenya
Maxamed Cali Nuur (Americo), Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya u fadhiya, ayaa wuxuu maanta uu dhiig ugu deeqay dadka ku waxyeeloobay weerarkii shalay.
Safiirka oo saakay tagey mid kamid ah Isbitaalada la seexiyay dadka ugu badan, ee ku waxyeeloobay weerarkaan, ayaa garowsaday in uu dhiigiisa uu u huro.
Safiirka ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dadka Somaliyeed ay taggayaan Isbitaalada Magaalada Nairobi, iyagoona markaasi dhiigoodu u huraaya dadka reer Kenya.
Sidoo kale wuxuu sehegay inay tani muujineyso, sida dadka Somaliyeed ay u garab taagan yihiin dadweynaha reer Kenya, ayna ka xun yihiin weerarka qabsaday.
Safiirka ayaa Dowladda Kenya u sheegay inaysan dadka Somaliyeed wax shaqo iyo shuqul midna ku laheyn, weerarka abaabulan ee Sabtidii lagu qaaday Dhismaha ganacsiga ee Westgate. oo ku yaala Bartamaha Magaalada Nairobi.
Dawlada oo uu ugu horreeyo Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud, Ra’iisul wasaaraha Cabdi Faarax Shirdoon iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa dhammaantood soo saaray dhambaalo isugu jira tacsi iyo cambaarayn oo ku aadan weerarka lagu qaaday Kenya
Short URL: http://somaliweyn.org/?p=6455
Posted by admin on Sep 22 2013. Filed under Wararka.
You can leave a response or trackback to this entry	1 Comment for “Danjiraha Soomaaliya ee Kenya oo dhiig ugu deeqay shacabka Kenya”
Awaare	September 22, 2013 - 4:23 pm	Hostana ka abaabul qaraxyada Kenya ka dhaca, qiiqna isku qari oo dhiig been ah isku qari. Diiradu aday ku saaran tahay tuug yahow al-shabaabka ah. Adiga iyo culusow daaha mar dhow waa la idinka faydii.
Halkan ka Daawo Live Universal Tv
Madaxweynaha Somaliya oo shaaca ka qaaday inaan la xiri doonin haweenka sheegta in la kufsaday
Xisbiga UCID oo soo saaray Warsaxaafadeed uu ku cambaaraynaayo Xarig lagula kacay Saxafiyiin Madax banaan.
Golaha Ammaanka oo sheegay inuu sii xoogeysanayo xiriirka ka dhaxeeya ururka Alshabaab iyo ururka Al-Qaacida
Shir looga hadlaayo Dhibaatooyinka Dumarka ay la kulmaan oo ka socda Muqdisho iyo Madaxweynaha oo ka qabgalaaya.
Ciidamada Nabad sugida oo saaka kala ceyriyay banaanbaxayaal taageersanaa talaabadii baarlamaanka
Warbixin ku saabsan Dagaal Xooggan oo Xalay ka dhacay degmad Heliwaa
Dr. Saacid Shirdoon waa wadani ay Soomaaliya weysay!! (Faallo dhab ka hadal ah)
Qaraxyo khasaare nafeed gaystay oo xalay ka dhacay degmada Ceelwaaq